10 जिम शब्द संग्रह शब्द:
1. Warm up: prepare for physical exertion oraperformance by exercising or practising gently beforehand. (व्यायाम गरी बिस्तारै पहिल्यै शरीरलाई कठिन व्यायामको लागि तयार गर्नु)
2. Cool down: the act or an instance of allowing physiological activity to return to normal gradually after strenuous exercise by engaging in less strenuous exercise. ( कठिन व्यायाम पछि बिस्तारै गतिविधि कम गर्नु)
3. Work out: To do physical exercises(शारीरिक व्यायाम गर्नु)
4. push - up:aconditioning exercise performed inaprone position by raising and lowering the body with the straightening and bending of the arms while keeping the back straight and supporting the body on the hands and toes. (एक व्यायाम, सीधा संग शरीर झुक्याउनु हात र औंलाहरूको सहयोगले)
5. Sit - ups:aphysical exercise designed to strengthen the abdominal muscles, in whichaperson sits up fromasupine position without using the arms for leverage. (एक शारीरिक व्यायाम गर्ने, पेट मांसपेशीमा बलियो बनाउन)
6. Pull - ups: an exercise involving raising oneself with one's arms by pulling up againstahorizontal bar fixed above one's head. (टाउको माथि निश्चित तेर्सो पट्टी विरुद्धमा खींच द्वारा कसैको काखमा संग आफूलाई हुर्काउन मुछिएको एक व्यायाम)
7. Squats: crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to or touching one's buttocks or the back of one's thighs. (झुकेको घुँडा र कसैको एडी नजिक वा हृदयस्पर्शी, चाक वा जांघों संग बस्न)
8. Crunches:aphysical exercise designed to strengthen the abdominal muscles;asit - up. (शारीरिक व्यायाम गर्ने, पेट मांसपेशीमा बलियो बनाउन)
9. Cardio (Cardiovascular): It means - relating to the heart. Cardio exercise uses large muscle movement overasustained period of time keeping your heart rate to at least 50% of its maximum level. (कार्डियो व्यायाम यसको अधिकतम स्तर कम्तिमा 50% आफ्नो हृदय दर राखेर समय को एक भरपर्दो अवधिमा ठूलो मांसपेशी व्यायाम प्रयोग गर्दछ)
10. Crash diet: A diet that helps you lose weight very fast(आहार जुन वजन धेरै छिटो गुमाउन मद्दत गर्छ)